Roa ireo lavon’ny Covid-19: 9 ireo tranga vaovao – Analamanga - ewa.mg
Roa ireo lavon’ny Covid-19: 9 ireo tranga vaovao – Analamanga
News - Roa ireo lavon’ny Covid-19: 9 ireo tranga vaovao – Analamanga
Niampy roa indray ireo lavon’ny
Covid-19, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Avy eto Analamanga sy avy
any Diana ireo nodimandry ireo. Tafakatra 213 izany izao ireo
matin’ny Coronavirus eto amintsika hatramin’ny 19 marsa no ho
Etsy andaniny, nidina be ny
fifindran’ny valanaretina. Miisa 12 ireo tranga vaovao tamin’ny
fitiliana miisa 506 natao ka avy eto Analamanga ny sivy amin’izany
raha any Boeny kosa ny telo fanampiny. Faritra roa ihany izany no
nisy olona nifindran’ny valanaretina.
Nidina ho 30 ireo marary mafy
mandalo fahasarotana “forme grave” raha 34 izany, afakomaly. Miisa
43 kosa ireo sitrana ka tafakatra 14 441 ny isan’ireo nahafeno
ny fepetra ho amin’ny fahasitranana tamin’ireo mararin’ny Covid-19,
miisa 15 769. Nihena 33 ka lasa 1 143 ireo mbola manaraka
fitsaboana sy arahi-maso ny toe-pahasalamany.
Miisa 64 676 ny fitiliana PCR vita
raha 6 802 kosa ny eo anivon’ny GenExpert.
L’article Roa ireo lavon’ny Covid-19: 9 ireo tranga vaovao – Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Kidnapping tany Toamasina : Votsotra i Armane Kamis, 1 voasambotra
Hatramin’ny nandraisana an-tanana ny resaka fakana an-keriny teto amintsika dia efa maro no efa rava tamin’ireo tambazotran-jiolahy. Ireo teratany karàna no tena lasibatra, ary vola be hatrany no takian’ireo mpaka an-keriny. Nirefodrefotra ny basy, votsotra omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany i Armane Kamis, rehefa tratra ny toerana nitazonan’ireo mpaka an-keriny ity teratany karana tompon’ny orinasam-pitaterana “Transfy”, nandritry ny enina andro. Ny alatsinainy lasa teo no naharay vaovao ny zandarimariam-pirenena tany Toamasina, fantatra fa tao Tsarakofafa no niafenan’ireo mpaka an-keriny, sy nitazonana ilay karàna. Nidina tany an-toerana avy hatrany ireo mpitandro filaminana nanao ny fikarohana, ka mbola tao avokoa ireo olona voalaza fa naka an-keriny azy. Raikitra ny fifampitifirana tamin’izany, ka nisy ny voasambotra. Lehilahy iray no azo sambo-belona nandritry ny fifanjevoana tamin’ity fandravana nataon’ny zandarimariam-pirenena. Ny telo hafa kosa mbola niezaka nifanandrina tamin’ny zandary tamin’ny alalan’ny tifitra variraka, raha ny loharanom-baovao hatrany. Sarona teny amin’ity farany nandritry izany ny fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny basy kalaky, iray miaraka amin’ny “chargeurs” miisa efatra. Raha tsiahivina, dia ny alarobia 21 novambra lasa teo no nalain’ny jiolahy miisa dimy nilanja fitaovam-piadiana an-keriny tao amin’ny birao fiasany ity teratany karana ity. Ny zoma teo kosa no niantso ny fianakaviany ireo mpaka an-keriny nitaky vola be. Tamin’ny fotoana nanoratanay ny vaovao kosa anefa, dia mbola raikitra ny fifandonana any an-toerana. Mbola mitohy ny fanenjehana an’ireo mpaka an-keriny tsy voasambotra. Ny vaovao mari-pototra no nahalalana fa tsy mbola nisy vola azon’ireo mpaka an-keriny. Fantatra kosa fa rera-tsaina sy rera-batana i Armane Kamis, izao afa-bela teo am-pelatanan’ny jiolahy izao. Andrasana ny tohin’ny raharaha sy ny hadirin’izao fifanandrinana eo amin’ny zandarimaria sy ny mpaka an-keriny izao. Valérie R. L’article Kidnapping tany Toamasina : Votsotra i Armane Kamis, 1 voasambotra est apparu en premier sur .L’article Kidnapping tany Toamasina : Votsotra i Armane Kamis, 1 voasambotra a été récupéré chez Triatra.
Ampasika – Vatobe: tapaka noho ny fanamboarana ny lalana
Nanomboka ny faran’ny herinandro ary hitohy ao anatin’ny iray volana ny fanamboarana ny lalana eny 67 Ha, izay iandraiketan’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Any amin’ny 4 oktobra any vao heverina ho vita ny fanamboaran-dalana.Misy, araka izany, ny fandaminana napetraky ny tanànan’Antananarivo ho fandrindrana ny fifamoivoizana hampandeha tsara ny asa fanamboarana. Voarara ho an’ny fifamoivoizan’ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan-dalana eo anelanelan’ny fandraisana taksibe 30 Ampasika hatreo amin’ny sampanan-dalana eo amin’ny Vatobe, 67Ha.Ireo fiara rehetra avy any 67Ha (Garage) te hihazo iny lalana iny dia mandray avy hatrany ny FDC Ampasika, Andohatapenaka coco plastika, 67 Ha (Vatobe), 67 Ha Ny Havana.Ireo fiara rehetra avy any 67 Ha (Ny Havana) te hihazo io ampahan-dalana tsy azo andehanana io kosa dia mandray avy hatrany ny lalana 67 Ha (Vatobe), Andohatapenaka, 67 Ha Garage.Anisan’ny mampitaraina ny mpampiasa lalana ny haratsian’ny lalana eny 67Ha sy ny manodidina iny ka nahafaly ireo mpandeha fiara ny fahafantarana izao fanamboarana ataon’ny fanjakana izao. Efa ho avy ny fahavaratra, manantena ny fahavitan’ny lalana rehetra ny mpampiasa lalana.Tatiana AL’article Ampasika – Vatobe: tapaka noho ny fanamboarana ny lalana a été récupéré chez Newsmada.
Levon’ny afo tanteraka ny fiara marika “Peugeot 305” iray teny Ambonisoa Itaosy, afak’omaly. Tsy fantatra izay anton’ny afo araka ny nolazain’ireo mponina teo amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny firehetana. Fiara mijanona amin’ny toeram-piantsonana ilay niharan-doza. Tsy nisy olona tao anatiny. L’article Fiara nirehitra est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra vehivavy eran-tany: norombahin’ny Amerikanina
Nifarana, omaly alahady, ny fiadiana ny amboara eran-tany, baolina kitra vehivavy, ka nibatan-dry zareo Amerikanina ny fandresena, tamin’ny isa 2 no ho 0, nanoloana ny ekipan’i Pays-Bas, tao amin’ny kianjan’ny Parc Ol, ao Frantsa. Tamin’ny alalan’ny penalty nodakan’i Megan Rapinoe, teo amin’ny minitra 61, ny nanokafan’i Etazonia ny isa ho azy ireo. Niezaka nanindry ary nanova taktika ry zareo Neerlandais, nanomboka teo, saingy tsy nahatoraka ireto vehivavy amerikanina ireto. Niditra indray ny baolina faharoa, ho an’i Etazonia, teo amin’ny minitra faha-69, tamin’ny alalan’i Rose Lavelle. Tsy nisy fiovana intsony nanomboka teo ny endri-dalao teo amin’ny roa tonta. Tsahivina fa fisalorana ny anaram-boninahitra faninefatra izao ny azon’ny Amerikanina, ao anatin’ny fiadiana ny amboara eran-tany amin’ny lalao baolina kitra vehivavy.Marihina fa tafapetraka eo amin’ny laharana fahatelo ny ekipan’ny Suède, taorian’ny lalao fiadian-toerana nifanandrinany tamin-dry zareo Angletera. Isa 2 noho 1 no nisarahan’ny roa tonta, teo am-piafaran’ny fe-potoana ara-dalana. Mi.RazL’article Kitra vehivavy eran-tany: norombahin’ny Amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4507 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4507 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Cisco Ambovombe – BEPC: « Tsy marina ny valopy misy laza adina efa nisokatra »
Nandiso ny vaovao niely ary nanamafy ny nambaran’ny eo anivon’ny minisitera ireo any ifotony. « Tsy nisy velively ny valopy misy laza adina efa misokatra, mialoha ny fanadinana BEPC. Nisy kosa anefa ny hosoka nataon’ny mpiadina iray », hoy ny sefo Cisco any Ambovombe Androy, Rabesalimanana Nicolas, omaly. Nanamafy izany ny lehiben’ny foibem-panadinana any an-toerana, i Tolojanahary Davidson. Nambarany fa nisokatra kely, tsy antonona rantsan-tanana iray ilay valopy misy ny laza adina tantara sy jeografia. « Niaraha-nanapaka sy nifanotronan’ny tompon’andrakitra teo fa hosokafana tanteraka izany ahitana ny marina. Ampy, tsy nisy nanombinana ny tao anatiny. Mety tsy voahidy tsara na nisy ampahan’ny valopy tsy nisy lakaoly », hoy izy. Nifanindry tamin’izany koa anefa ny hosoka « fraude » nataon’ny mpiadina iray, nitondra telefaonina an-tsokosoko ary nanafina izany, niatrika ny fanadinana. Sarona izy io fa nifandefa « message » amin’ny olona any ivelany manontany ny valin’ny fanontaniana amin’ny laza adina. « Efa noraisina ny fepetra momba izany », hoy izy.Tsiahivina fa nanamafy ny tsy maha marina io vaovao io ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.Synèse R. L’article Cisco Ambovombe – BEPC: « Tsy marina ny valopy misy laza adina efa nisokatra » a été récupéré chez Newsmada.